Khabar Kantipur » ‘पाँच लाख दिनुपर्छ, म मिलाउँछु भन्दै सांसद मोदीले यसरि मागेका रहेछन घुस !
‘पाँच लाख दिनुपर्छ, म मिलाउँछु भन्दै सांसद मोदीले यसरि मागेका रहेछन घुस !
लोडसेडिङ हटाएको नाममा कुलमानले अनियमितता गरेको उनको तर्क थियो। जवाफमा कुलमानले आफूले त्यस्तो अनियमितता गरेको भए सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। त्यस्तो आरोप प्रमाणित भए आफू झुन्डिन तयार रहेको कुलमान भनाइ थियो।
बैठकमा कुलमानले आफ्नो स्पष्टिकरणमात्र दिएनन्। मोदीले किन अनियमितताको आरोप लगाएका हुन् भन्नेतर्फ पनि संकेत गरे। उनले देशको भविष्यसँग जोडिएको प्रसारण लाइनको तार अड्काउने जनप्रतिनिधिले त्यसको रिसइबी साँध्न नमिल्ने बताए।
काम रोकिएपछि विद्युत प्राधिकरणले छलफल अघि बढायो। प्राधिकरण, उद्योग वाणिज्य संघ, सांसद मोदी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठक बस्यो।
त्यसपछि उनले समाधानको अर्को उपाय सुझाए। ‘मैले गर्नेसम्म गरिसकें। जति उपाय लगाउँदा पनि भएन, अब गर्ने हो भने अर्को उपाय छ,’ उक्त बैठकमा मोदीले भने।
उनको अर्को उपाय सुन्न सबैले कान ठाडा पारे। ‘पैसा दिनुपर्छ, पाँच लाख, म त्यहाँका मान्छेलाई दिएर मिलाउँछु,’ मोदीले भने। त्यसपछि त्यहाँको बैठक अर्को पटक बस्ने गरी सकियो।
एउटै पार्टीका भएकाले मन्त्री पुनले नै सांसद मोदीसँग कुरा गरेर समाधान निकाल्न आग्रह गरे। मन्त्री पुनले मोदीसँग कुराकानी गरे। मन्त्रीसँगको कुराकानीपछि मोदीले प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई उल्टै धम्कीपूर्ण भाषामा थर्काए।
सांसद मोदीले भने आफूले पैसा नमागेको दाबी गरेका छन्। उनले त्यहाँ जनताले क्षतिपूर्ति चाहिन्छ भनेकाले जनप्रतिनिधिको हिसाबले प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा आफूले राखेको बताए।
‘त्यहाँका जनताले केही आवाज उठाएका छन्। केही माग पनि छन्। त्यसको व्यवस्थापन गर्न क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ,’ बुधबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै मोदीले भने,‘अब अहिले सिडिओसहित दसौं/बीसौं मान्छेको अगाडि मैले पैसा मागेको भन्ने मिडियामा आइराखेको छ। अब भन्नुस् त म सिडिओसँग पाँच लाख माग्ने? मैले क्षतिपूर्ति देऊ भनेको हो।’
यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा प्राधिकरणले यी सबै प्रक्रिया बिनाकुनै विवाद पूरा गरेको थियो। निकै फराकिलो बाटो भएकाले बाटो छेउमा गाडिएका पोलले धेरै स्थानीयलाई प्रभाव नपार्ने भएकाले क्षतिपूर्तिको कुरै नआउने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। सेतोपाटि बाट साभार